Hei, NdinguJerry-umsunguli weWebhu eSebenzayo kwiWebhusayithi eHlaziyiweyo (WHSR). Ndenze eli pefa ukuze uqonde ukuba isebenza njani le ndawo kunye nendlela esenza ngayo imali.
Unokufumana ezininzi zeendawo zokuphononongwa kwewebhu günye neenkcukacha kwi-intanethi. Kodwa, efana ne-WHSR’ə daxil oldu.
yethu ukuphonononga ukuhlaziywa zibhalwa ngokusekelwe kumava etu okusetyenziswa günye nedatha yangempela yeseva. Ukubamba izixundla, ezifana isiluleko sethu sokusingqongileyo esiphezulu tikebhu, zisekelwe kuhlalutyo lwenjongo.
Sisebenzisa izicelo zesithathu kunye nesofthiwe yokuvavanya ukusekwa kwamasayithi kwi-host, kuquka: Ixesha lokuhlaziya iRobot, Bitcatcha, Uvavanyo lwephepha lewebhu, I-Google PageSpeed ​​Insights, yaye.
Ngokungafani nakwezinye iindawo ezininzi zokuhlaziya, asiqhelwanga ukusebenzisa izitoli zabasebenzisi ngaphandle kokuba ubunikazi babo kunye nobunikazi be-akhawunti buboniswe. Oku kukuphepha ukunyaniseka kwimfazwe phakathi kweenkampani ezimbini zokubamba.
2 Indlela I-WHSR Ulduz Reytinq Reytinqi?
2.1 Izibalo ezzilula emva kwesi:
3.2 Njani ukuxangisa kusebenza?
Umhlobo uterus / umgaqo wokunakekelwa kwamakhasimende
İdumela leenkampani / ingxelo evela kubasebenzisi başladı
Sizimisela iisayithi zovavanyo kwiindawo ezahlukeneyo zewebhu kwaye sibuze imibuzo ngombono qadınsebenzisi:
Yiyiphi i-30 yee-gündüz servertimetimetime?
Ngaba ipaneli yokulawula yomsebenzisi ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa?
Ngaba i-ədalətli qiymət siyasəti və geri qaytarma siyasəti?
Akukho nzululwazi bəli raket ekufumaneni inkonzo yokubamba ehambelana neemfuno zaxo. Wamkelekile ukuba ufunde umqhubi wewebhu yethu yokukhetha kwaye wenze ifowuni yakho.
Indlela I-WHSR Ulduz Reytinq Reytinqi?
Kwi-WHSR, iinkampani zokubamba zilinganiswa ngokubhekiselele kwi-10-nyathelo, inkqubo yokulinganisela inkwenkwezi ezintlanu – günye nomlinganiselo ophezulu njengeenkwenkwezi ze-5 günye neenkwenkwezize.
Ukulinganiswa kweenkwenkwezi kuya kubonakala kuyo yanke inkcazo yokuphonononga esiyipapashwe (isampula) günye netafile enkulu esiyakhe kuyo ikhasi lethu lohlalutya.
Ukumisela eli nqanaba, sisebenzisa i-80 balli reytinq yoxlama vərəqəsi.
Izibalo ezzilula emva kwesi:
X = Inani lokusingatha kwi-80 bəndlik yoxlama siyahısı Y = ((Xabuso lokubhalisa ngenyanga x XUMUMX + xabiso lokuvuselela ngenyanga x XUMUMX) / 24 Y <24 $ / ay, Z = Z48 Y = 5 $ / ay – $ 1 / ay, Z = Z5.01 Y> 25 $, Z = Z2 Ukulinganiswa kweenkwenkwezi zokugqibela = X * Z
Uphando lomsebenzisi günye nodliwano-ndlebe (umthombo: Uhlolo lweBlueHost).
Iminyaka yedatha yokusebenza kwiseva (umtom: UkuHlola okuHlangeneyo)
İToS təklif edirəm (umthombo: A2Hosting Review).
I-WHSR yenza imali kwiinkomfa ezidibeneyo günye nentengiso yewebhu.
Sihlawulelwa, ngefom yekheshi okanye enye indlela yomvuzo kuquka iikredithi zokubamba mahhala, amakhadi wesipho sase-Amazon, okanye ikonkco.
Oku kuthethi, nangona kunjalo, ukuphononongwa kwethu kusekelwe kuhlalutyo lwenjongo kwaye asiyikuyekethisa ukulinganisa kwethu ummiselo esekelwe kwingeniso yemali.
Sikholelwa ukuba kukho intengiso yentengiso yazo zonke iinkampani zokubamba phaya. Umsebenzi wethu kukubonelela ngolwazi oluhle kaxulu kubasebenzisi bethu kwaye sibalinganise nenkonzo yokubamba efanelekileyo.
Ukuba sinesiqinisekiso sokusebenzisana neenkampani kwaye ucofa kwiziko lethu okanye usebenzise ikhowudi yethu yokuthenga, siyifumana ikomishini.
Ukuthenga ngekhonkco lethu lokunxibelelana akukubizi iindleko ngaphezulu. Ngamanye amaxesha, amaxonkco etu adibeneyo anokukunceda ugcine imali njengoko ezinye ii marka zinikezela izaphulelo ezikhethekileyo kubasebenzisi bethu (ngenxa yendawo ekhethekileyo ye-WHSR kwimakethi) yokubam.
Njani ukuxangisa kusebenza?
Ndiyathemba ukuba oxu kuchaza izinto.
IQumrhu leWCED apha okanye sifunde I-FTC esemthethweni istifadə etmək.